Zim dictator either fine or missing - reports - South African Magazine - SA PROMO
Zim dictator either fine or missing – reports
Not that we really care but Zimbabwe’s dictator for almost 40 years is apparently fine and speaking his partner in crime a tad further south in Africa, Jacob Zuma, on the telephone and apparently complaining that he is being confined to his house.
It follows news that the Zimbabwean Defence Force (ZDF) has taken control of the bankrupt and corrupt African banana republic.
Meanwhile Eyewitness News repots that South African president Zuma, in his capacity as chair of SADC, is sending special envoys to Zimbabwe and Angola “in light of the unfolding situation in the Republic of Zimbabwe”, while Al Jazeera and CNN are reporting that the whereabouts of President Robert Mugabe is unknown.
The South African government communications agency, sanews.gov.za, says on its website Zuma “is sending the Minister of Defence and Military Veterans, Nosiviwe Mapisa-Nqakula and the Minister of State Security, Bongani Bongo, to Zimbabwe to meet with President Robert Mugabe and the Zimbabwean Defence Force (ZDF)… Zuma had spoken to President Robert Mugabe on Wednesday, who indicated that he was confined to his home but said that he was ‘fine’. South Africa is also in contact with the ZDF.”
Special envoys will also be sent to the Republic of Angola to see President Joao Lourenco, chairperson of the SADC Organ on Politics, Defence and Security to brief him on the situation.
Speaking in a statement on behalf of the SADC, he expressed his great concern over the unfolding political situation in Zimbabwe. Zimbabwe’s military was deployed to the streets in front of government offices, courts and parliament.
Earlier the ZDF said in a stement:
Tags: Jacob Zumarobert mugabeZimbabweZimbabwe dictatorZimbabwe military rule